Gerard Piqué oo si cad u sheegay in Barcelona aysan wali gaarin heerka loo baahnaa – Gool FM
(Barcelona) 15 Nof 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Piqué ayaa qiray in Blaugrana aysan bixinin qaab ciyaareedkii laga filayay xilli ciyaareedkan, isagoo xusay in Barca ay horumar sameyn karto waqtiyada soo socda.
Inkastoo ay Barcelona hoggaamineyso miiska kala sareynta horyaalka La Liga ee dalka Spain, iyo sidoo kale group-ka ay kaga jirto tartanka Champions League, haddana Blaugrana ayaa lagu dhaleeceeyay qaab ciyaareedkeeda liita inta badan xilli ciyaareedkaan.
Haddaba Gerard Piqué ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan ku soo guuleysanay La Liga labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, hadda waxaan hoggaamineynaa horyaalka, iyo sidoo kale group-keena tartanka Champions League, laakiin sidaas oo ay tahay waxaan heleynaa dhaleeceeno”.
“Miyaan sifiican u ciyaari karnaa? Waa hubaal, laakiin xilli ciyaareedka wali waa uu fogyahay, waxaana sameyn karnaa horumar”.
“Inaad guuleysato oo kaliya kuma filna Barcelona, taageerayaasha waxay sidaas sheegeen in ka badan hal jeer, marka waa inaan guuleysanaa oo aan sameynaa qaab ciyaareed fiican, sababtoo ah dhabtii kuma jirno qaab ciyaareedkii la doonayay inaan sameyno”.